HORDHAC : Liverpool vs Bayern Munich – Wakaaladda Wararka Hiilnews
HORDHAC : Liverpool vs Bayern Munich
Talaado, Feberaayo, 19, 2019 (HNN)- kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda ku marti soori doonta kooxda Bayer Munchun kulan ka tirsan wareega 16-ka Champions league lugtiisa koowaad.
Waa kulan aad loo wada sugayey ilaa iyo maa waqtigii la sameyey isku aadka wareegan , indhaha caalamka oo dhan ayaa mar qura loo jiheen doonaa garoonka Anfield .
Virgil van Dijk ayaa ka ganaaxan kooxda Liverpool waxa uuna seegayaa kulanka lugta koowaad ee tartanka champioms league wareegiisa 16-ka , Fabinho ayaa lala mataaneen doonaa Joel Matip hadii uusan Dejan Lovren diyaar u noqon kualnka .
Liverpool ayaa mudo todobaad diyaar garow ugu jirtay kulankan waxaana dib safkooda ugu soo laabtay daafca garabkeeda midig ee Trent Alexander-Arnold .
James Milner ayaa ku soo bilaaban kara dambeedka daafca midig hadii wax wal wal ah laga qabin taam ahaanshiyaha Alexander-Arnold geesta kale Naby Keita ayaa diyaar u ah in uu difaacdo booskiisa qadka dhexe .
Xherdan Shaqiri ayaa shaki lagaa qabaa in uu kulankan ku soo bilowdo si uu u wajaho kooxdiisii hore ee Munchun , Roberto Firmino ayaa seegay taba barkii isniinta waxaana soo wajahay xanuun balse Andy Robertson ayaa seegi kara kulanka lugta labad hadii uu qaato caalmada jaale ah .
Manuel Neuer ayaan wax cabsi ah laga qabin ka dib markii uu ciyaaray kulankii ay guusha ka gaareen maalinmadii jimcaha kooxda Augsburg ciyaar ku soo dhamaatay 3-2 waxa ayna taa la micno tahay in uu taam buuxa u yahay kulanka Liverpool .
Kooxda Bayern Munich ayaa xaqiijisay in Kinglsey Coman uu diyaar u yahay in uu wajaho Liverpool,James Rodriguez ayaa heysta fursad uu ugu soo bilaaban karo ciyaarta madaama uu ciyaar cajiib ah soo bandhigay kulankii Augsburg.
Niko Kovac ayaa tartan kula jira Joshua Kimmich ku soo bilaawashada khadka dhexe hadii Rodriguez uu ku fashilmo dooqa macalinka , Niklas Sule ayaa dafaaca dhexe xaadir ku ah waxa uuna booska ka badalayaa Jerome Boateng oo dhaawac kulankan ku seegay .
Thomas Müller ayaa ganaax ku seegaya ciyaarta , halka Kimmich uu maqnana karo kulanka lugta labad ee champions league hadii uu qaato caalamad jaale .
kooxda ka ciyaarta horyaalka Bundesliga safkooda waxaa kale oo ka maqan Corentin Tolisso iyo Arjen Robben , halka Franck Ribery iyo Coman ay isku garbin doonan weerarka garabka .
Kulanka : Liverpool vs Bayern Munich ( Champions League )
Goorta : 11 : 00 oo habeenimo
Garsoorka : Gianluca Rocchi (ItA)
Xaqiiqooyinka ciyaarta ka hor kulanka :
Bayern Munich ayaa badisay kaliya hal kulan 7-dii kulan ee ay wajahday kooxda Liverpool dhamaan tartamada (4- bareejo iyio 2 -qasaaro) marka kaliya ee ay badisay waxa ay aheyd bishii November 1971 markaa oo ay kaga adkadeen laboo gool waxaana ukal dhaliyeen Gerd Müller iyo Uli Hoeness .
Liverpool iyo Bayern’ markii ugu horeysay ee ay wada ciyaareen tarankan oo loo yaqiini jiray European Cup balse hadda loo yaqaano Champions League waxa uu dhacay xili ciyaareedkii 1980-81 Liverpool ayaana kulankii lugta labaad kaga soo gudubtay Munchun goolal Away ah taas oo u sahashay in ay u gudban finalka waxa ayna 1-0 ay ku garaaceen kooxda Real madriid oo finalka soo tiigsatay sanadkaas .
Bayern marna gool kama aysan dhalin gool kooxda Liverpool iyada oo lagu ciyaaraya garoonka Anfield 3-kulan oo ay ku wajahday .
Liverpool ayaa guul daro la’an ah 19-kulan oo xiriir ah tartamada Europeanka kulamda ka dhaca Anfield (14-badis 5-bareejo), markii ugu dambeysay ee garoonkooda qasaaro ay kula kulmaan waxa ay aheyd Bishii October 2014 ciyaar ay is wajheen kooxda Real Madrid tartanka champions league waxa uuna ku dhamaaday kulankaa (3-0) waqtigoodii ugu dheeraa ee aan garoonkooda lowga badin waa 40-kulan waxa ay dhacday intii u dhaxeysay September 1974 iyo December 1991.
Bayern ayaa kamida shan kooxood oo aan marna laga badin tartanka champions league wareegiisa guruubyada waxaa sidaas oo kale aan marna laga badin kooxaha Ajax, Barcelona, Lyon iyo Porto. Bayern ayaana ugudbeysay Champions League wareegiisa semi-finalka todobo kamida 9-kii xili ciyaareed ee la soo dhaafay .
Afar kamida ciyaartoyda kooxda Bayern ayaa safan kara kualankoodii 50-aad ee tartanka Champions League hadii ay ka soo muuqdaan kulanka Liverpool waana xidigaha kala ah : Thiago Alcantara, Mats Hummels, Javi Martinez iyo James Rodriguez.
Sideed kooxood ayaa kaga sareeya naadiga Bayer kubadaha shuudadaka la sameyey intii lagu guda jiray wareega guruubyada ,balse ma jirto kooxd kaga badan Bavarianka fursadaha aay abuureen intii lagu guda jiray wareega guruubyada oo ah (21- fursadood ).
Eeg shaxda macquulka ah :
HORDHAC : Liverpool vs Bayern Munich added by admin on February 19, 2019